विश्वसनीय यात्रा संसाधन | सडकको लागि एक युगल
तपाईंको यात्रा अब योजना बनाउनुहोस्!
एक युगल रोडको साथ बुकिंग गरेर विश्वभर कहीं पनि होटल स्ट्रीटहरू 20% मा जानुहोस्। हामी मात्र प्रयोग गर्छौं जुन हामीले प्रयोग गर्दछौँ, र सहयोगी साझेदारको रूपमा अनुमोदन गर्छौं। तलको लिंकमा क्लिक गर्नुहोस्, र तपाईंको विश्राम बुक गर्नुहोस्!
हामीले अन्तर्राष्ट्रिय र घरेलु होटलको धेरै होटल स्टेसनको लागि Booking.com प्रयोग गर्यौं। तिनीहरूसँग सजिलो प्रयोग गर्ने बुकिंग इन्जिन छ, र केहि उत्तम दर उपलब्ध छन्!
Trekeffect तपाईंलाई सीधा स्थानीयहरू र सचेतक यात्रीहरू जसले प्रत्येक स्थान राम्रोसँग थाहा पाउन सुन्न दिन्छ! यात्री-पेशात्मक यात्रा कार्यक्रमहरूको तिनीहरूको विशाल डेटाबेसले तपाईंलाई योजना र परेशानी बिना स्मार्ट यात्रा गर्न मद्दत गर्दछ।
एक्स्पेडिया हाम्रो जाने-एल्टिटकरेटर मध्ये एक हो, जहाँ हामीले पेरू र म्याक्सिको बाट इङ्गल्याण्ड सम्म पूर्ण भ्रमण गरेका छौं! यसको अतिरिक्त, तिनीहरू सँग उत्कृष्ट पुरस्कार कार्यक्रम छन्।
Travelocity एक साइट हो जुन हामीले यूरोप र उत्तर अमेरिकामा मुख्य पुस्तक प्रयोग गर्यौं, र सामान्यतया प्रमुख शहरहरु भन्दा कम-यात्रा गरिएका क्षेत्रहरूमा आंशिक मूल्य निर्धारण सौदों छ।
हामी Hotels.com लाई प्यार गर्छौं, विशेषकर जब हामी बस एक साना देखि रहन को लागि एक महान होटल सम्झौता खोज्दै हुनुहुन्छ। प्रायः एक ठाउँ हामी जहाँ बस्न खोज्दा सम्झौता सम्झौता!
LoveHolidays.com तपाईंको छुट्टै छुट्टिहरू वा छुटहरू अनुकूलन गर्न चार लचीला प्याकेजहरू प्रदान गर्दछ! तपाईं अगाडि बढ्नको लागी संसारमा लगभग कहीं पनि कम लागतको लागि पुस्तक बनाउन सक्नुहुन्छ, योजना र भुक्तानी सरल बनाउनु भएको छ!
उत्तम उडान सम्झौताहरू फेला पार्न, तपाईंले रचनात्मक प्राप्त गर्नु पर्छ - वा एउटा ठूलो कम्पनी हो जुन तपाईंको लागि काम गर्दछ। तलका लिङ्कहरू तपाईले हाम्रो पार्टनर पृष्ठहरूमा लिनुहुनेछ, जहाँ तपाईले 40% मा घर र घरेलु उडानहरू खोज्नुहुनेछ!
Cheapflights.com विश्वभर लगभग कहीं पनि नि: शुल्क बुकिङ उडानहरूमा बन्द-समय बुकिङहरू फेला पार्न एक उत्तम संसाधन हो! हामीले यो अमेरिकी र क्यारिबियनमा धेरै भ्रमणहरूको लागि प्रयोग गरेका छौं।
JustFly.com घरेलु यात्राको लागि एक महान स्रोत हो, विशेष गरी अन्तिम-मिनेट सौदों जब तपाईं बस बाहिर जान्नुहुन्छ।
स्किस्केलर एक ब्याकप्याकरको सपना हो, जहाँ तपाइँ कुनै पनि सस्ता, आगामी उडानहरू संसारको कुनैपनि शहरमा खोज्न सक्नुहुनेछ र अर्को गन्तव्यको रूपमा जानको लागि सस्तो ठाउँहरू खोज्न सक्नुहुनेछ।
प्राइक्सलाइन अर्को महान एग्रीलिटर हो, जहाँ हामीले भेट्टाएका छौं हामी उत्कृष्ट सम्झौताहरू पाउँछौँ र उडानहरूमा विज्ञापित लागत भन्दा कम।
हामी भ्रमण गर्नु अघि हामी अर्को भाषामा कम से कम आधारभूत आदेशहरू सिक्नका लागि प्रमुख समर्थकहरू हौं। यो दोहोरी हो, संस्कृति र मानिसहरूको लागि आदर देखाउँदछ, र उनीहरूको आँखामा आदर कमाउँछ। यहाँ उपकरणहरू हामी सिक्दछौ, र तपाई संगै जान्न सक्नुहुन्छ!
एक उपन्यास अवधारणा सत्य हो विलुप्त भाषा शिक्षा, Preply.com एक अनलाइन प्लेटफर्म हो जहाँ एक वास्तविक विश्व वातावरण मा भाषाहरु सिक्न सक्छ। उनीहरूले शिक्षकहरू र विद्यार्थीहरूलाई स्काइप मार्फत विभिन्न भाषाहरू सिक्न चाहन्छन्, र तपाईंलाई सक्रिय रूपमा एक स्थानमा राख्दछन् प्रयोग तपाईंले के सिक्नुहुन्छ, जो छिटो सिक्न जान्छ।
तपाईं कहाँ यात्रा गर्नुहुन्न, त्यहाँ जान सकिन्छ कि कसरी जान आवश्यक छ, र तपाइँ कसरी एक चोटि एकैचोटि कसरी प्राप्त गर्न आवश्यक छ हो त्यहाँ। युरोपियन रेल लाइनहरूबाट भाडामा कारहरूमा सर्वश्रेष्ठ गर्न, तपाईं हाम्रो विश्वसनीय र परीक्षण सल्लाहमा भरोसा गर्न सक्नुहुन्छ!
हवाईअड्डामा स्याउलाई तपाईंको कार पार्क गर्न तिर्नुको थक थियो? हवाई अड्डा को नजिकै केहि डलर प्रति दिन तपाईंको कार पार्क पार्क एन 'फ्ली को उपयोग गर्नुहोस, र आफ्नो त्वरित र आसान सेवा को उपयोग गरेर आफ्नो टर्मिनल को शटल मा।
हामीले नियमित रूपमा भाडा कारहरू बुक गर्न एविस प्रयोग गरेर अनुभव गर्यौं, र तिनीहरूसँग सधैँ ओभरमोबाईलहरूको व्यापक सरणी छ जुन कम दरबाट छान्नुहोस्।
व्यवसाय यात्रीहरूको लागि एक उत्कृष्ट छनौट, बजेटमा उत्कृष्ट इनाम कार्यक्रम छ जुन तपाईंलाई छिटो र सस्ती रूपमा नि: शुल्क भाँडामा निर्माण गर्न अनुमति दिन्छ।
कवरेजको प्रकारका बारे एक धेरै उपयोगी गाइडले साधारण यात्रा बीमा नीतिको अपेक्षा गर्न सक्छ। यो विदेशमा यात्रा बीमा कवरेज प्राप्त गर्नुको महत्त्वमा तुलना गर्नु उत्तम स्रोत हो। हामीले फेला पारेका स्रोतहरू, यो हो अन्तिम यात्रा बीमा गाइड.
यो गर्भवती हुने गर्नाले गलत छ तपाईंलाई तपाईंलाई जीवनकाल को छुट्टै छुट्टीमा जोगाउन रोक्छ। गर्भावस्था को चरण को बावजूद, संसाधनों द्वारा Holidaysafe यात्रुहरूलाई विदेशमा टाउकोमा भरोसा प्रदान गर्नेछ, ज्ञानमा सुरक्षित उनीहरूले आफैलाई वा उनीहरूको बच्चालाई कुनै हानि गर्दैनन्।